Yusuf Garaad: Xariifnimada Xisaab ayaa ka dambeyn
Waxa la isku hayaa waa masiirka umadda Soomaaliyeed. Ma ahan wax ka hooseeya. Waxaan dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya Masraxa Siyaasadda dalka, kuwa ka shaqeysta iyo inta ka aga dhow aan xasuusinayaa wax shakhsigana u roon dalkana u roon.
Waa in Allah ka cabsi lagu daro howsha socota. Waa in tallaabo kasta laga dhigo mid Ilaaheey raalli ka yahay inta garaadkeennu na siin karo. Waan ogahay dad Allah ka cabsi ku sifoobay in ay jiraan. Waxaanse la hadlayaa kuwa u haysta in ay ayaga ugu badiso xaaladdan oo kale.
Waxaan la hadlayaa isdirayaasha aan la dirsan. Waxaan la hadlayaa gacansatada siyaasadda. Waxaan la hadlayaa qalinshubatada siyaasadda. Waxaan la hadlayaa ragga col-u-joogga ah ee markaan oo kale gulufka horbooda ayaga oo ubrinaya. Waxaan la hadlayaa kuwa is been-farriima. Waxaan la hadlayaa naftood hafrayaasha. Waxaan la hadlayaa kuwa guureeya sida fiidmeerta. Waxaan la hadlayaa kuwa u haysta in siyaasaddu ay tahay khiyaamo, been iyo dil sidaana ku shaqeeya.
Waxaan la hadlayaa kuwa wax kale oo dhan sheega marka laga reebo ujeeddadooda dhabta ah. Taas oo ah dantooda shakhsiga ah oo aan wax kale u wehlin.
Waxaan la hadlayaa inta Rabbi illowda xilligan oo kale, hadday xusuusan yihiinna aan ficilkooda laga garan, marka laga reebo wakhtiga salaadda in ay jameecada dhinac uga jiraan amaba ayagu ay xusuusiyaan in ay salaaddii gashay. Waxaan la hadlayaa kuwa aamminsan Rag iska dhicin iyo Rabbi ka cabsi in aan la is waafajin karin.
Qof walbow xusuusnow, kaligaa ayaa mas’uul ka ah qowlkaaga iyo ficilkaaga. Ilaaheey hortiisa ayaadna la tegi doontaa adiga oo xafiis, baabuur dhexdiis, hotel, fadhi-carbeed ama guri goglan oo la ilaalinayo midkoodna aan ku dhex qaxweyneyn.
Waxaan xusuusinayaa in talooyinka ay bixinayaan, go’aanqaadashada ay dhiirri gelinayaan iyo ka qeyb galka abaabulka dagaalka wejiyada badan ay mar kasta ku saleeyaan danta Qaranka.
Dowladnimadeenna culeys intan ka badan ayaa hore u soo maray, umana dhiman ee wey ka gudubtay. Haddana waxaan hubaa in hore loo socon doono, insha Allah.
Isla qormadaan markii aan ku lifaaqay Facebook, sidan ayay uga jawaabeen akhristayaashu.
Post by Yusuf Garaad.
Posted by Yusuf Garaad at 08:33:00